पूर्वमै पहिलोपटक नोबेलमा थोर्याकोस्कोपी सुरु - www.biratsandesh.com
पूर्वमै पहिलोपटक नोबेलमा थोर्याकोस्कोपी सुरु
प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०७६, शनिबार १४:४७
विराटनगर, २८ वैशाख । विराटनगर, २८ वैशाख । पूर्वी नेपालमै पहिलोपटक नोबेल शिक्षण अस्पतालले मेडिकल थो¥याकोस्कोपी सुरु गरेको छ ।
रोगका कारण फोक्सो बाहिरको झिल्लीमा जमेको पानी, पिप, हावा वा विकार युक्त पदार्थ निकाल्ने वा फोक्सोसम्बन्धी रोग पत्ता लगाउने विधि थो¥याकोस्कोपी हो । यो विधिमार्फत छातीमा प्वाल पारेर थो¥याकोस्कोप छिराई रोग पत्ता लगाउने र उपचार गर्ने गरिन्छ । नेपालमा विरलै मात्र प्रयोगमा रहेको यो उपचार पद्धति काठमाडौं बाहिर पहिलोपटक सुरु गरिएको नोबेल अस्पतालका छाती तथा फोक्सो रोग विशेषज्ञ डा. रामहरि घिमिरेको भनाइ छ ।
डा. घिमिरेका अनुसार रोगका कारण फोक्सो बाहिरको झिल्लीमा पानी, पिप, हावा वा विकारयुक्त पदार्थ जम्मा हुने गर्छ । त्यसलाई थो¥याकोस्कोपी विधिमार्फत निकालेपछि बिरामीलाई निको हुन्छ । थो¥याकोस्कोपीका लागि पूर्वी नेपालका बिरामीहरू काठमाडौं वा मुलुक बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अब नोबेलले यो उपचार पद्धति सुरु गरेपछि बिरामीलाई अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेको डा. रामहरिले बताए । ‘हामीले पूर्वी नेपालमा पहिलोपटक थो¥याकोस्कोपी सुरु गरेका हौं । नेपालका १÷२ वटा अस्पतालमा मात्र यो उपचार हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट बिरामीलाई धेरै सजिलो भएको छ ।’ थो¥याकोस्कोपीका लागि बिरामी पनि प्रशस्त आउन थालेको नोबेल अस्पतालले जनाएको छ ।
नोबेलमा थो¥याकोस्कोपी सुरु भएपछि सजिलो भएको भन्दै बिरामीहरू हर्षित छन् । फोक्सोको बाहिरी झिल्लीमा पिलिएको रगत जमेर उपचारका लागि तेह्रथुमबाट आएका जिवेन्द्ररन शेर्माले नोबेलमा थो¥याकोस्कोपी गराएपछि निको भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । भ¥याङबाट लडेका शेर्माको फोक्सोको बाहिरी झिल्लीमा रगत पिलिएर जमेको थियो । जसका कारण उनलाई बोल्न र श्वास फेर्नसमेत गाह्रो थियो । तर, छातीमा प्वाल पारेर थो¥याकोस्कोप छिराई पिलिएको रगत निकालेपछि सन्चो भएको उनले बताए । शेर्माको जस्तै समस्या भएका दर्जन बढी बिरामीलाई नोबेलले थो¥याकोस्कोपी विधिमार्फत रोग पत्ता लगाई निको पारिसकेको छ ।
रंगेलीमा छात्रालाई महिनाबारी समबन्धि कार्यक्रम
आज हनुमान जयन्ती मनाईंदै
विप्लव समूह बिरुद्ध सरकारको कठोर कदम, आपराधिक संगठन भएको ठहर, लगायो प्रतिबन्ध
मानबहादुर एक्लैले ९ जनाको हत्या गर्न सक्दैन : स्थानीय
मोरङमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर तीनजनाको मृत्यु
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि मोरङका उद्योगी उत्साहित
नेपाली लेखक संघद्वारा रचना वाचन कार्यक्रम आयोजना
ओलम्पिक छनोट खेल्न म्यानमार पुगेको महिला फुटबल टोली स्वदेश फिर्ता